सरकार र राखेपलाई किरण चेम्जोङको खुलापत्र- खेलाडी सधैँ काठमाडौंको धुलोमा, तपाईंहरू चाहिँ चिल्लो गाडीमा ? - समय-समाचार
समय-समाचार मंगलबार, २०७७ असोज २७ गते, १५:४८ मा प्रकाशित
काठमाडौं, असाेज २७ । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जाेङले सरकार र खेलकुद परिषद्लाई खुलापत्र लेखेका छन्। फेसबुकमार्फत् उनले खुलापत्र लेखेका हुन्।
यस्ताे छ उनले लेखेकाे खुलापत्र
म नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको तर्फबाट कप्तान किरण चेम्जोङ आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को तर्फबाट सरकारलाई के सम्झाउन चाहन्छु भने फुटबल मात्रै नभएर आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सम्पूर्ण खेलकुद पूर्ण रूपमा सुचारु गर्न हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दछु।
किन एकान दुकान गर्दै हुनुहुन्छ के खेलाडी सधै मर्म मै पर्ने र मर्ने हो भने तपाईंहरूले सम्बन्धित निकायमा बसेको के अर्थ रह्यो र?
खेलाडी चाहिँ सधैँ काठमाडौंको धुलोमा, तपाईंहरू चाहिँ चिल्लो गाडीमा?
तर, यतिका महिना खेलाडी खेलकुद कुन दुर्दशामा छ भने एउटा भनक पनि चासोको विषय नबनाको देख्दा फुटबलमा भबिष्य खोज्ने भाइ/बहिनीहरूमा कतिको असर परेको छ भने कुरा खुल्स्त रूपमा देखिन सकिन छ।
सबै देशमा फुटबल सुरु भैसक्दा पनि हाम्रो देशमा खेलमैदानको लागि दु:खद घडीमा बनाको रंगशालामा फिलिमको सुटिङ म्युजिक भिडिओको लागि प्रवेश खुला हुने। फुटबलका लागि खेल्न चै किन न हुने फुटबलले देशका लागि त्यति ठूलो असर पार्छ र ? अबका दिनमा सम्पूर्ण खेलमैदानमा खेल सुचारु गर्दिन अनुरोध गर्दछु ।
७ महिनादेखि बेरोजगार भएका खेलाडीको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ। जुन खेलाडी खेलेर नै जीविका चलाउँथ्याे ऊ त आजभोलि खेलमैदान छोडेर विदेश पो जाँदैछ त लाज हुने कुरा होइन यो खेलाडी खेलकुद र राजयको मान्य ज्यू। जय देश । जय देश। जय नेपाली फुटबल।